Posted by တန်ခူး at 12:38 AM
May I know where this place in SG is?
ချိုသင်းလဲ သောကြာနေ့ညနေ ရုံးအပြန်ဆို တပတ်စာ ဈေးဝယ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အမတို့လို ဓညင်းသီး စားချင်ရင်တော့ ဗမာဆိုင်တွေ လယ်သမားဈေး တွေ သွားမှပဲ ရတယ်။ မမ ချက်တဲ့ဟင်းလဲ တခါလောက်တော့ စားချင်ပါ့။
ဒီမှာတော့ကင်းမုန်သီးတွေ့ ပြီး ဒုက္ခ ရောက်ပြီ..
ငယ်ငယ် ကဆို အဒေါ်က ကင်းမုန်သီးနဲ့ဘယာကြော်နဲ့ချက်ကျွေးတာ..သိပ်ကြိုက်တာ..
ဒီမှာ ဗီယက်နမ်ဆိုင်ရှိပေမယ့် ဗူးသီးနဲ့ ကင်းမုန်သီး
အမရေ ဒါလိုဆိုင်မျိုးကတော့ မဇနိ အကြိုက်ပဲ...
အလွမ်းလည်းပြောတာပေါ့နော် - ကိုယ်စားချင်တာ အတော်များများလည်း အဲဒီမှာရတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့...
အမတန်ခူးရေ အမတို့ဆီကို ပြောင်းချင်စိတ်ပေါက်လာပြီနော်
ပေါများလိုက်တဲ့ အသီးအနှံတွေ မြန်မာပြည်နဲ့ တူလိုက်တာ
အဟိ.. မမရေ.. ကြွားလိုက်ဦးမယ်.. တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မနေ့က စင်ကာပူက သူငယ်ချင်းပြန်လာလို့ အကို နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ၀ယ်ထည့်ပေးလိုက်တာ ဒန့်ဒလွန်သီး၊ ချဉ်ပေါက်ရွက်၊ ဘူးသီး ၂ လုံးတောင် သိလား၊ ဂျူးမြစ်၊ ကင်းပုံသီး၊ သရက်သီး၊ ဆူးပုတ်၊ ပဲသီး.. အဟိ.. ကျန်သေးတယ်.. မမှတ်မိတော့ဘူး... အားလုံး စင်ကာပူကချည်းပဲ.. ဒညင်းသီးလည်း ပါတယ် အမရေ.. ပျော်လွန်းလို့.. အဲ.. သယ်လာပေးရတဲ့သူကတော့ အမရေ.. မစားသာလှဘူး.. ကိုယ်လည်း အားနာနာ မျက်နှာပူပူနဲ့ပဲ ပစ္စည်းတွေ ယူပြီး ပြန်လာခဲ့ရတယ်.. :P
ကင်းပုံသီးကို ဘယ်လိုချက်စားရမှန်းမသိတာ.. အခု အမပြောသလို မျှစ်လေးနဲ့ ပုဇွန်ခြောက်လေးနဲ့ ကြော်စားကြည့်ရမယ်..
ဆိုင်လိပ်စာဗျို့ ဆိုင်လိပ်စာ..အရေးကြီးတာကိုကျတော့ ချန်ထားခဲ့တယ်။ ဆိုးပ
အိမ်နားက ဆိုင်မို့ လို့ လိပ်စာမပေးတာလားဗျာ။
လိပ်စာသိရ ရင်တော့ မန်မန်လာစားအုံးမယ်။
ကုလားဈေးကို လွမ်းသွားပြီ။ အဲဒီလူ တွေ တကယ်ချီးကျူးတယ်နော်။ လူကိုမြင်တာနဲ့ ဘာလူမျိုးလည်း ဆိုတာ လုံးဝ အပ်ကျ သိတယ်။ မလွဲဘူး။
ခုတော့ ရှိတာလေး နဲ့ ၀အောင်စားနေ ရတာပေါ့။
ဟုတ်တယ် အမရေ ဆိုင်ကဘယ်နေရာမှာလဲ ဆိုတာတော့ မပြောဘူး၊ ညီမလဲ ကင်းပုံးသီးကြိုက်တယ်၊ ပုဇွန်ခြောက်နဲ့ နှပ်စားတာလဲ ကောင်းတယ် နော် အမ၊
Hey, I want to come & eat...
တခြားသူတွေ တောင်းထားသလို တောင်းပါရစေ ။ ဆိုင်လိပ်စာလေး မ စ ပါ အမရေ ။ ဒိန်ညှင်းသီးတွေ စားချင်လိုက်တာနော် ။
ဟင်း။ ငါးဘဲ ပေးပြီးကွန် ချက် တော.မပြဘူး။ သိတ်ဆိုးတယ်။ တကယ် ကို မြန်မာပြည် က ဈေး အတိုင်းပါဘဲ ။
That shop is at jurong east wet market, near Blk 250 Jurong East st 24... :)
ဝေတို.အိမ်နား မှာလဲ အဲလိုဆိုင်မျိုးရှိတယ်
ဆိုင်ရှင်က ကုလားလူမျိုး။ ဗမာလိုတော့ မပြောတတ်ဘူး
ဈေးဝယ်တာပြီးရင် ဟင်းချက်တာလာမယ်နော်။ သွားရည်ကယိုချင်လို့ ပါ။
သူများကို သွားရည်ကျအောင် လာလုပ်တဲ့ ဒေါ်တန်ခူးရေ... ဆိုင်လိပ်စာလေးလဲ ပေးပါအုံး...။
တန်ခူးအိမ်နဲ့အဲဒီ့ဆိုင်နဲ့နီးတယ်ဆိုရင်လဲ တစ်ခါထဲပြောပါနော်..။ ဆိုင်သွားရှာမနေတော့ဘဲ အိမ်ကိုဘဲ တန်းလာပြီး တန်ခူးချက်ထားတာတွေဘဲ
အစ်မကြီး ဘယ်က အခွံလွတ်ဈေးသွားနေတာလဲလို့တယ်စုံပါလားးး :P( စာလုံးပေါင်းမှားတာ အခုမှသိတယ် )
An...It's from J.E. Hee Hee..But he's always fighting with his mom :P
အမရေ.. ဆိုင်ကဘယ်နားလေးမှာလဲ... ကေကေဈေးမှာလား ... အမတို့အိမ်နားမှာဆို ၀ယ်ထားပေးပါ လာယူမယ်လေ... ဟိ
ဦးဂျေဆိုထားတာကတော့ “အချစ်ဆုံးမင်းနဲ့အတူ အမြဲသောက်တဲ့ ဒီဆိုင်လေး..”တဲ့
အမက တစ်ယောက်တည်း သွားဝယ်တာ။ ပိုလွမ်းစရာကောင်းမှာပေါ့နော... :P
အဲဒီ ဆိုင်က ဘယ်နိုင်ငံဘယ်နားမှာ လဲဟင် အမရေပြောပြလို့ရလား
ဘူဒူက တစ်ယောက်ထဲ သွားတယ်လို့ပြောလို့ လဲ...။
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ ကဘဲ တန်ခူးတို့နှစ်ယောက် အတူတူသွားတာ တွေ့ လိုက်သေး...။ ဟီဟိ...
မတန်ခူး က ဆိုင်လိပ်စာ မေးထားတာလည်းမဖြေဘူးနော်..
Please give us the shop address. So many people are requesting but why you don't want to give?????
Anonymousရေ… ကြည်က လိပ်စာပေးထားတယ်လေ… ကြည့်ကော်မန့် လေး ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်…
ချိုသင်းရေ… လယ်သမားဈေးတဲ့လား… နာမည်လေးကြားတာနဲ့ ဝယ်ချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်… ဒီတခါ စင်္ကာပူလာဖို့ အစီအစဉ်ရှိရင် ပြောနော်… တကယ်ချက်ကျွေးမယ်…
ကိုသစ်နက်ဆူးရေ…ကင်းပုံသီးကို ဘယာကြော်နဲ့ ချက်တာ ကြားတာနဲ့ စားချင်စရာနော်…မြေရှိရင် စိုက်ကြည့်ပါလား… ကင်းပုံပင်က ဖြစ်လွယ်တယ်…
ကိုဇနိ+မဇနိရေ… မေမေလာတုန်းက နေ့ တိုင်းသွားဝယ်တာ… မြန်မာပြည်ကလိုပေါ့… မေမေက ရေခဲသေတ္တာထဲက ထုတ်စားရတာ မကြိုက်လို့ တဲ့လေ… ဟန်းနီးမွန်း ဒီကိုလာခဲ့… လိုက်ပို့ ပေးမယ်… အဲဒီဆိုင်လေးကို…
မြတ်နိုးရေ… မေးကြည့်ပြီးပြီ… ဂျပန်စကား အရင်သင်ဦးမယ်တဲ့…
ရွာသားလေးရေ… ကြည့်ကော်မန့် မှာ လိပ်စာပါတယ်လေ…
နုရေ… ရိက္ခာတွေ တောင့်တော့ ပျော်နေတယ်ပေါ့… နုတို့ အိမ်နားလေးလာတဲ့သူတွေ ဟင်းနံ့ မွှေးမွှေးလေးကို သွားရည်ယိုနေကြမှာ မြင်ယောင်သေး…
ယူပန်ဒီရေ… ဆိုင်လိပ်စာက အပေါ်က ကြည်ပေးထားတဲ့ ကော်မန့် ထဲမှာ…
Skyblueရေ… အိမ်နဲ့ က မနီးမဝေး… မန်မန်လာစားလို့ ရပါတယ်… ကြိုတော့ပြော… ရှောင်နေရအောင်လို့ … အဲ.. ဟုတ်ပါဘူး…ကြိုချက်ထားရအောင်လို့ …
ကေရေ… ကုလားဈေးက ပိုစုံတယ်… အိမ်နဲ့ ဝေးတော့ တခါတလေမှ ရောက်ဖြစ်တယ်… ဒီက ညီမတွေကို လူကြုံရှိရင် ပို့ ခိုင်းပါလားကေရေ…
ညီမချစ်လေပြေရေ… ကြည်ရဲ့ကော်မန့် ထဲမှာ လိပ်စာပါတယ်ညီမ…လာလည်တာကျေးဇူးပါ… နောင်လဲ လာလည်ဦးနော်…
ဂျစ်ရေ… ကြည့်ကော်မန့် လေးက လိပ်စာအတိုင်းပဲ ညီမရေ… ဒညင်းသီးလာပို့ ပေးရမလား.. လိပ်စာသာပြောလိုက်….
ပန်ရေ… ပင်နင်ဆိုးလားမှာ ခုတော်တော်စုံနေပြီနော်… သွားရတာဝေးတော့ ဒီဆိုင်လေးနဲ့ 
ပေါက်ရေ… မေမြို့ မှာက ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ နော်… ဂေါ်ရခါးညွှန့် လေးတွေများ နုမှနု… ဒီတခါပြန်ရင် ရောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်… လူကြုံသယ်ခဲ့ရမလား…
မမရေ… ကြည်ပေးတဲ့ လိပ်စာလေးအတိုင်းပဲ… မမက အရှေ့ ဘက်မှာနေတာဆိုရင်တော့ ဝေးလိမ့်မယ်… အနောက်ဘက်ဆိုရင်တော့ အတော်ပဲ…
တက်တူရေ… ကြည်ပေးတဲ့ လိပ်စာလေးအတိုင်းပဲ…အင်း… ဒီလောက်ညွှန်းရတာ ဒီတခါ အဆစ်ပိုတောင်းဦးမှပဲ…
ညီမလေးပင်နီရေ… လိပ်စာပေး စာတိုက်ကပို့ လိုက်မယ်… ကလေးသားလေးလဲ နေကောင်းပါတယ်ညီမရေ…
ကြည်ရေ… ဟိဟိ… ကြည်လဲ အဲဒီမှာ ၀ယ်နေကျလား… ပြောလို့ မရဘူး… တို့ နဲ့ ဆုံချင်ဆုံနေမှာနော်… Ar Queeဆိုတာ ဘာလဲဟင်… သူ့ နာမည်လား…
ဝေရေ… ဟန်ကျတာပေါ့… အိမ်နားလေးဆို အောက်ဆင်း ၀ယ်လိုက်ရုံပဲနော်… တို့ က အဲလောက်မနီးဘူး…
လင်းရေ…ဟင်းချက်က အဲလောက်မကောင်းဘူး ညီမရဲ့… ဒါပေမယ့် ကြိုးစားချက်ပေးမယ်နော်…
သက်ဝေရေ… ကြည့်ကော်မန့် မှာ လိပ်စာနော်… တန်ခူးတို့ အိမ်နဲ့ အရမ်းတော့ မနီးပါဘူး… အရမ်းလဲ မဝေးဘူး… အိမ်ကိုဝင်လာစားမှာ တကယ်လား… ချက်ထားလိုက်မယ်နော်…
မောင်မျိုးရေ… ဟုတ်တယ်..ဟုတ်တယ်… အခွံလွတ်ဈေး… GSTမပေးရဘူးလေ…
Anonymousရေ…ဟုတ်ပါ့… သူ့ အမေနဲ့ အမြဲရန်ဖြစ်နေတာ… သူ့ အမေကြီးတယောက်ထဲ ရှိရင် တို့ ကမ၀ယ်ဘူး… သဘောမကောင်းလို့ …
ကိုပီတိရေ… ကေကေနားမှာ မဟုတ်ဘူး… ကေကေက ခုယာယီနေရာရွှေ့ ထားတော့ သိပ်ဝယ်လို့ မကောင်းဘူး… ဘာဝယ်ချင်တာလဲ ပြောလေ…၀ယ်ထားလိုက်မယ်…
ဟုတ်တယ်ကိုသုခမိန်ရေ… အမေနဲ့ ဆိုသိပ်ကောင်းမှာ…
မုဒိတာရေ… ကြည့်ကော်မန့် လေးထဲ လိပ်စာပါတယ်နော်…
သက်ဝေကတော့ လုပ်ပြီ… အဲဒီအချိန် အိမ်ကအမျိုးသားက အိပ်မက်မက်နေတုန်း…
Anonymousရေ… အပေါ်က ကြည့်ကော်မန့် ထဲက လိပ်စာပါပဲ… ကော်မန့် ပြန်တာ နဲနဲနောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါ….
အေးနော် ဆိုင်ရှင် ရဲ့ customer service က သဘောကျစရာ